UC Davis Admissions: GPA, dhibcaha SAT, iyo buundooyinka ACT
UC Davis GPA, SAT, iyo ACT Data
01 ee 02
Jaamacadda California oo ku jirta Heerarka Aqbalaadda ee Davis
UC Davis GPA, Dhibcaha SAT, iyo buundooyinka ACT ee loogu talagalay. Xogta Warbixinta Cappex
Iyada oo la aqbalo heerka aqbalaadda boqolkiiba 40, Jaamacadda California ee Davis waxay ka mid tahay jaamacadaha dadweynaha ee xulashada ah ee dalka. Iskuulada xooggan ee iskuulada iyo barnaamijyada tacliinta waxay ka heleen meel ka mid ah liiska jaamacadaha ugu sareeya iyo kulliyadaha sare ee West Coast .
Sidee ayaad ugu qiyaaseysaa Jaamacadda California ee Davis? Xisaabi fursadahaaga helitaanka qalabka bilaashka ah ee laga helo Cappex.
UC Davis GPA, SAT iyo ACT Graph
Jaantuska kor ku xusan, dhibcaha buluuga ah iyo kuwa cagaaran waxay u taagan yihiin ardayda qaata. Sida xogta ka muuqata, inta badan ardayda UC Davis ugu badnaa celcelis ahaan "B +" celcelis ahaan ("celcelis ahaan" A ayaa celcelis ahaan ah), dhibcaha SAT (RW + M) ee ka sarreeya 1000 (1100 way ka badan yihiin), iyo dhibco dhexdhexaadin ah ACT 21 ama ka sareeya. Fursadaha gelitaanka ayaa sii fiicnaanaya marka tirooyinkaas kor loo qaado. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qarsoodiga hoose ee cagaaran iyo cagaarka ku yaal garaafka ay tahay arday badan oo casaan-badan oo leh GPA-da iyo natiijooyinka imtixaanka tartanka ayaa weli laga soo diiday UC Davis si aad u aragto garaafka labaad ee hoose.
Dhinaca garabka, waa muhiim in la ogaado in tiro arday ah la aqbalo dhibcaha imtixaanka iyo darajooyinka hoos yimaada heerka caadiga ah. Sida jaamacadaha California oo dhan , UC Davis ayaa leh oggolaansho dhammaystiran , sidaas darteed saraakiisha oggolaanshaha waxay qiimeynayaan ardayda oo ku salaysan xog ka badan tirada tirooyinka. Ardayda muujiya nooc ka mid ah tayada gaarka ah ama sheeko xariif ah oo ay ku sheegaan waxay inta badan helayaan muuqaal dhow xitaa haddii dhibcaha iyo dhibcaha imtixaanku aysan u fiicnayn. Akhriska xooggan iyo waxqabadyada ka baxsan waxyaalaha ka baxsan ayaa ah qayb muhiim ah oo ka mid ah arji guul leh.
Liiska sugitaanka iyo macluumaadka diidmada UC Davis
Macluumaadka UC Davis Rejection iyo Waistlist. Xogta Warbixinta Cappex
Markaan ka saarno macluumaadka ardayga ee garaafka, waxaan heleynaa sawir aad u hooseeya. Sida aad arki karto, arday badan oo leh "A" celcelis ahaan iyo dhibcaha imtixaanka caadiga ah ee dhibcaha imtixaanka lagama helin Jaamacadda California ee Davis. Xitaa ardayda leh dhibcaha ugu fiican iyo buundooyinka imtixaanka waxay noqon karaan liis sugitaan. Xogtan ayaa caddaynaysa muhiimada ay leedahay xogta aqbaar la'aanta tirada, U hubso inaad ku daryeesho jawaabaha su'aalaha shakhsi ahaaneed ee fekerkaaga , waxaadna hubisaa inaad muujisid siyaabaha aad ka fiican tahay fasalka.
Sidoo kale garaw in xogta ku jirta garaafka aysan sheegin sheekada oo dhan. Barnaamijyada qaar ee UC Davis way ka doorbidaan kuwa kale. Sidoo kale, shuruudaha aqbalitaanku maaha kuwo isku mid ah ardayda ka baxsan gobolka iyo kuwa caalamiga ah sababta oo ah waxay u yihiin codsadayaasha gudaha ku jira.
Haddii aad jeceshahay UC Davis, Waxaad sidoo kale Joogi kartaa Jaamacadahan:
Ardayda dhigata Jaamacadda California ee Davis waxay u muuqdaan inay codsan karaan xarumaha kale ee UC. UC Irvine waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan ee ku yaal koofurta Los Angeles, jaamacadduna waxay ka yartahay oo ka yar tahay UC Davis, iyo sida aad ka arki karto UC Irvine GPA-SAT-ACT garaafka , heerarka oggolaanshaha waa isku mid.
Jaamacadda California Riverside waa mid aan wax yar ka doorbidin UC Davis, sidaas darteed waxay noqon kartaa doorasho fiican haddii Davis uu ka kooban yahay aqoontaada aqoontaada. Ka fiiri Riverside GPA-SAT-ACT garaafka si aad u aragto muuqaal sawireed ee heerarka oggolaanshaha.
Jaamacadda oo si gaar ah ugu xooggan injineernimada iyo sayniska, Jaamacadda California San Diego waa doorasho aad u fiican. Is-qoristu waa kuwa ka doorbidaya kuwa ka duwan Davis, Irvine, iyo Riverside sidii aad ku arki kartid garaafka UCSD GPA-SAT-ACT . Waxaad u badan tahay inaad u baahan tahay "A" dhibcaha si aad u hesho.
Haddii aad xiiseyneyso jaamacad gaar ah, codsadayaasha UC Davis waxay inta badan xiiseeyaan Jaamacadda Pacific iyo Jaamacadda San Diego .
Salem College GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacada Xavier University GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacada Bloomsburg ee Pennsylvania GPA, SAT iyo ACT Data
Cal Maritime GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacadda Ricardo GPA, SAT, iyo ACT Data
Bryn Mawr College GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacadda Baker GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
Jaamacadda Illinois ee Urbana-Champaign GPA, SAT, iyo ACT Data
Xarunta Xarunta GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
SUNY Brockport GPA, SAT iyo ACT Data
Tirakoobka Aqoonsiga Kulliyadda Baruch
Taylor University GPA, SAT iyo ACT Data
Jimmy Carter - Xaqiiqda madaxweynaha 39aad
Nooca Waxbarashada Kinesthetic
Amarka toddobaad: Waxaad uumi gashaa sino
Qorshaha Qormada: Weyn iyo ka yar
Ornithomimids - Bird Mimic Dinosaurs
Buugga Tilmaamaha Jarmalka ah
Qalabka Muusikada ee Aduunka in Qoys kasta uu hanti yeelan doono
Maqaalka 10aad ee Aqoonsiga Xisbiyada
Magaca Aabaha ayaa lagu badalay Islii Ellis
Jodi Picoult - Siideynta ugu dambeysay
Ku darsiga dokumentiga waxtarka kadib
Waa maxay sababta aad uhesho furaha casriga ee dukuminti iyo sida loo isticmaalo
Aqoonsiga Jaamacadda Elon
Nasiib darro Hillary Clinton Quotes
Dhammaadka Boqortooyada Roomaanka
Fahamka Isbedelada Metaboole ee Maktabadda ATP-ga ee Glucose
Doorashada Nicholas Sparks Review Book
Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo ee Ku Saabsan Waxbarashada Sare Iyo Waxbarashada Dadka Waaweyn
Xaqiiqooyinka ku saabsan Vaquita Endangered
Maxay Sababta Shayddaanka Uga Baran "Waxkasta Haa"
Liiska Dugsiyada Dadweynaha ee Bilaashka ah ee Ardayda Texas, K-12
Barashada Falanqaynta iyo Tababarka
Maxay Fududeeyaha Gambarka?
Anigu ma isticmaali karaa sawir toosan oo toos ah?
Best Amon Amarth Best
Waa maxay garashada ruuxa?
Cun hacer cuando la ESTA lahayn autoriza viajar a Estados Unidos